सरकारको उमेर २ वर्ष पुगेपछि राजगद्दी डगमगायो « Sansar News
१५ फाल्गुन २०७६, बिहीबार ११:२३
राजतन्त्र फिका पारिदिने नयाँ राजतन्त्रको अभ्युदय भएको प्रतीत हुन्छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रम ओली जहाँ जहाँ पुग्छन्, त्यहाँ त्यहाँका स्थानीय सरकारहरूले सार्वजनिक विदा घोषणा गर्ने चलन चलेको छ । नेपालमा सुशासन नहुनुमा कारण धेरै छन् ।
नेपालको शासनमा पहिले तपाई कसको छोरा वा भाइ वा सालासाली वा नातेदार हो त्यो हेरिन्छ । त्यसपछि कुन दलको हो हेरिन्छ । त्यसपछि दलभित्र पनि कुन नेताको मान्छे हो त्यो खोजिन्छ । त्यस्ता कुनै सम्बन्ध छैन भने त्यसपछि तपाईले कति पैसा दिनसक्छ त्यो मूल्यांकन गरिन्छ । न विज्ञता, न पेशागत क्षमता, न शिक्षा एवं योग्यता, न अनुभव तथा विगतको उपलब्धिको प्रोफाईल, न संस्कार वा सांस्कृतिक स्वभाव वा सच्चरित्र ब्यक्तिको खोज हुन्छ ।
अनि हामी सरकार र प्रशासनले कामै गरेन, गर्नै सकेन, कामै भएन भन्दै सांसदको टाउकाको संख्या पर्याप्त नपुगेर अस्थिर सरकारहरू बनेकाले यस्तो भएको हो भन्ने पटमुर्ख निस्कर्षमा पुगेर समय बर्बाद गर्दै आएका छौं । नाईटोमा मलम लगाएर टाउको दुखेको ठिक पार्न खोजिरहन्छौं ।
प्रम ओलीको दुईतिहाई सरकार बाहिर बाहिर स्थिर र दह्रो जस्तो देखिनुको एकमात्र कारण संविधानमा २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन बन्देज लगाईएकोले मात्र थियो र हो। ओलीको अन्ध कार्यशैली र कसैको साथ लिएर नहिड्ने कार्यनीति देखेरै सरकारको उमेर २ वर्ष पूरा हुनासाथ यहाँ रडाको मच्चिन्छ र राजगद्दी डग्मगाउने छ भन्ने भय बिकसित भईरहेको थियो । त्यो नमिठो आँकलन भए पनि आफ्नो पूर्वआँकलनले मूर्त रूप लिदै गएको देखिदै छ ।
अहिले अरूहरूलाई रामलिलाको तमासा देख्न पाएर रमाईलो लागे पनि अरिंगालहरूमा बज्रपात भइरहेको देखिदै छ । तिनमा दिनको चैन, रातको निद्रा हराम भएकोले र तिनले बिगतमा कसैका लागि लगाएको त्यत्रो समय, धन र श्रमको सत्यानाश भएकोमा कस्तो पिडादायी पश्चाताप महसुस गर्दै होलान् भनेर सम्झदा पनि तिनीहरूप्रति मस्तै सहानुभूति जाग्छ । हेर नानी बाबुहरू हो, के गर्छौं तिमीले मान गरेर के गर्नु ? तिम्रा कथित प्रिय नेताहरूले तिमीहरूलाई बाल गन्दैनन् । यस्तै हो अन्धराजनीतिको परिणाम !
सबै कुरा कर्मको नतिजा हो, यसबाट कोही मुक्त हुदैन ।